Kedu ka ịzaghachi azụlinks ga-esi meziwanye ọnọdụ m na saịtị na SERP?
O nwere ike ịbụ na ị nụrịrị ọtụtụ akụkọ jọgburu onwe ya banyere ịmepụtaghachi azụmazụ ụlọ na iji ihe a na-ekwu na-ezighị ezi. Otú ọ dị, achọrọ m ka ị were oge ma jiri uche na-eme ihe a. N'agbanyeghị aha ọjọọ nke usoro a, jiri blog na-ekwu okwu dịka ihe azụ backlink nwere ike inyere gị aka ịmepụta ezi mmekọrịta gị na ndị ahịa gị ma wuo ikike ikike gị n'ime ụlọ ahịa gị. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịnweta ụzọ ziri ezi maka ịmepụta backlinks iji nweta ezigbo SEO. Ma ọ bụghị ya, ị ga-enyo enyo na anya nke engines na-achọ ma nwedịrị ike ịnweta ntaramahụhụ maka usoro ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ ọhụrụ ị ga-esi enweta ihe njikọ si na nkwupụta. Ị nwere ike ichefu ihe niile ị gụrụ tupu. Ụzọ anyị ga - esi ekerịta gị anaghị adị ka ụdị ọrụ njikọ ọ bụla ọzọ nke chọrọ iji dofollow, ocheol, ọchụchọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị na - anụ.
Ụzọ ọhụrụ ị ga-esi nweta backlinks backlinks
Ka anyị tụlee ebe ị chọrọ ịgbaso iji nweta akara azụ azụ dị mma n'ime oge dị mkpirikpi.
Chọta blọọgụ kwesịrị ekwesị
Na nhazi mbụ nke mgbasa ozi ụlọ njikọ gị, ị ga-achọta blọọgụ kwesịrị ekwesị maka ịmepụta njikọ gị n'ebe ahụ. Ikwesiri iduzi nyocha oru nlekota ahia gi ma choputa ihe ntanetiti ndi na enweta uzo di nma na ijikota aka. Ọ bụghị ihe doro anya ịchọta maka ụlọ ọrụ ntanetị kacha mma. Kama ya, ị nwere ike ịchọta blog blog PR ma ọ bụ forums na ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ya.
Iji chọta ihe dị gị mkpa, ị nwere ike ịtinye otu ajụjụ n'ime Google. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na-arụ ọrụ gị na ngalaba ahụike, ịnwere ike ịjụ engine maka nyocha "TOP blogs" ma ọ bụ "forums maka ndị dọkịta. "N'ihi nke a, ị ga-enye ndepụta nke blọọgụ TOP dabere na ụfọdụ na-elekọta mmadụ ma kwuo na nbudata ndị ahụ na-enweta.
Ozugbo ị chọpụtara na azụmahịa gị chọrọ isi ebe nrụọrụ weebụ, ịnwere ike ịga n'ihu na alaka ụlọ ọrụ site na ndị na-esonụ njikọ site na commenters ha blog. Ọ ga - enyere gị aka iwelie isi ala gị na saịtị.
Ịhazi blọọgụ gị
Jiri ndenye aha RSS na Google Reader maka ịdebe blọọgụ gị ụlọ ọrụ. Mepụta nchekwa dị iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. N'ịkọwa usoro a, ị ga-achọpụta ụdị edemede a nke emelitere na nso nso a.
Gbalịa ịbụ onye mbụ
Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ịmepụtaghachi azụghachi azụmaahịa na ọnụọgụ ọnụgụ ahụ naanị iji dee ihe na-adịghị mkpa, okwu mkparị. Ị nwere ike ịbụ onye mbụ na-aza ajụjụ n'azụ post, mana ọ bụ naanị mgbe ị gụchara ya dum ma chee echiche maka ntụgharị uche na ezi uche. Ọ bụrụ na isi njikọ gị na-arụ ọrụ na nkwụnye aka ruo n'ókè, ndị na-aza ajụjụ ndị ọzọ ga-akacha pịa ya iji chọpụta onye ị bụ. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ị bụ onye mbụ, mgbanwe gị dị elu karịa ma ọ bụrụ na ị na-aga nnọkọ ahụ mgbe ọtụtụ ndị na-ekwu okwu Source .